WHO oo Sheegtay in Liberia laga Ciribtiray Cudurka Ebola – Radio Daljir
Maajo 10, 2015 3:38 b 0
Axad, May 10, 2015 (Daljir) —Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa shaacisay ayaa shalay oo Sabti ahayd sheegtay in cudurka Ebola laga cirib-tiray dalka Liberia oo ka mid ah waddamada ku yaalla Galbeedka Afrika ee uu cudurkan dhibaatada weyn u geystay. Markii muddo 42-casho ah oo laba-jibbaar ka badan inta uu cudurku soo ridan karo Qofka uu ku dhaco aan cudurka lagu arkin dalkaas.
Dabaal-dag ku saabsan ka guuleysashada Ebola oo lagu qabtay Manrovia oo ay ka hadshay madaxweynaha dalkaas, Ellen Johnson Sirleaf ayaa sheegtay in cudurka uu ahaa midkii ugu xumaa oo muddo sannado ah dhibaato weyn u geystay dalalka Galbeedka Afrika.
“Runtii dadkii cudurkan ka badbaaday waa kuwo aan dhibaatadiisa hilmaami doonin, sidoo kalena shacabkeenu ma iloobi doonaan murugadii xumayd ee laga dhaxlay cudurkan muddo qarniyo ah,” ayay tiri Sirleaf.
Sidoo kale, Ellen Johnson ayaa Maanta booqatay qaar ka mid ah xarumihii cudurkan lagula tacaalayay ee ku yaalla magaalada Monrovia, iyadoo u hambalyeysay shaqaalihii gargaarka caafimaadka ee cudurkan la dagaalamay, iyadoo la xusuusto in 200 oo dhakhaatiir iyo kal-kaaliyeyaal caafimaad isugu jiray ay cudurkan u dhinteen.
“Dhallinyaro badan oo reer Liberia ah ayuu cudurkan sal-faday, kuwaasoo ku riyoonayay bilooyin ka hor inay dhameystaan waxbarashada ayna dadkooda iyo dalkooda u adeegaan, iyadoo shacabka Liberia aysan weligood hilmaami doonin dhallinyaradaas,” ayay ku dartay hadalkeeda Sirleaf.
Ellen Johnson Sirleaf ayaa eedeyn u jeedisay dalalkii sheegay in la tacaalidda cudurkan uu yahay mid liita, xilli dagaal adag lagula jiray, waxayna dhanka kale amaantay waddamadii gacanta ka geystay in Ebola laga ciribtiro dalka Liberia, iyadoo xustay in hadda uu dagaalkii cudurku dhammaaday ayna dib u billaabayaan dhismaha noloshooda.
“Maanta waxaan ku dhawaaqayaa in Cudurka Ebola maanta Dalka Liberia laga Cirib-tiray. Waana naga dhamaadeen xusuusihii murugada lahaa ee aan cudurkan halista ah kala kulmi jirnay maalin walba intii uu waddankeenna ka jiray,” ayay madaxweynaha Liberia tiri.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ayaa sheegtay in Liberia oo keliya uu cudurka Ebola ku dilay 47,00 oo qof, isagoo dalalka Galbeedka Afrika ee kala ah Sierra Leone iyo Guinea uu cudurkan ku dilay Ebola 11,000 oo qof.